Sacramento Area Restaurants Kubatsira Thanksgiving Dinner
Sacramento Area Restaurants Kupa Thanksgiving Dinner
Dya kunze uye unakidzwe nguva yakawanda nemhuri iyi Thanksgiving
Kana iwe usati uri mamiriro ekugadzirisa kusvibisa 15-pound turkey kana kuputika poda nokuda kwechigadzirwa chepikiti yakagadzirwa, zvino zvichida kudya kunze kunogona kungova yako yakanakisisa sarudzo. Paunenge uchigona kurota kuva mudzidzisi uyo anoita kuti zviso zvose zvisaita kushanda nesimba, izvo zvisingawanzoitiki zvekuti vakabatikana veSramramento mhuri dziri kutotamburira kuenzanisa basa, vana, uye ivo pachavo.
Iwe haufaniri kunetseka mukicheni kana kutochenesa imba.
Ita zvigadziro pane imwe nzvimbo yekutengesa uye uise pfungwa pane izvo zvinonyanya kukosha pamusoro pezororo-shamwari, mhuri, nekuyeuka.
Tarisai mashoma Sacramento-nzvimbo dzekudyidzana dzinopa Sangano reKutenda kuti ikubatsirei kuti muzorore munguva yezororo. Danidzira mberi kwekuchengetedza kana kutarisa menusiti avo paIndaneti kuitira sneak peak yezvokudya zvemanheru.
Kwemakore anopfuura makumi mashanu, The Firehouse restaurant in Old Sacramento yaive nzvimbo yekuenda kune yewaini mazita akawanda, kudya kwakanaka, uye zvinhu zvakanaka. Nzvimbo imwe neimwe inonzwa inofungidzirwa uye inoshandiswa muzviyo zvekurima. Nokuda Kwekutenda, unogona kurapwa kune kudya kwemazuva mana pamutengo wakatarwa. Zvokudya zvako zvinosanganisira hors d'oeuvres, howa yakagumburwa, kutengesa kwemanheru kana zvimwe zvisarudzo zvishoma, uye pie yepungu.
Yakavakwa muna 1853, uye pakutanga imba ye Sacramento Nha. 3 Firehouse, iyi inoshamisa uye isingakanganwiki yakagadzirisa zvakakwana kumanzwiro ekare ezororo.
The Firehouse iyo ndiyo nhoroondo yezvakaitika kare yeSirramento. Iyo yokudyira inogara muimba yekutanga mu Old Sacramento kuti idzoserwe uye yakasarudzwa sechinhu chinoshamisa chenhoroondo.
La Provence Restaurant neTrace
Pamusana pekunaka kweFrance neMediterranean yakaitwa muCalifornia-maitiro, tarisa La Provence Restaurant muRoseville nokuda kwemenyu yavo yeKutenda yakakosha.
Mutengo unotarirwa mhando unopa zvidzidzo zvakawanda, kusanganisira hors d'oeuvres, kusarudzwa kweladhi, entree (kusanganisira turkey), mapande emhuri, uye masukisi anonakidza sepukisi cheesecake, pistachio creme brulee, kana saled caramel pecan pie.
Piatti inoshandiswa kuItaly-yakafuridzirwa, yemazuva ano-yakagadzirirwa chikafu nekusimbiswa pamapurazi emunharaunda nevarimi. Piatti inozvidzivirira pakubatanidza "rustic, chikafu chinonaka nekunyoresa, kusagadzikana kwekugadzirisa, kusvikirika uye kunakidza waini-rwandu-zvizhinji zvayo zvinoshandiswa kuburikidza nepurogiramu yedu-ye-table-kugoverana kwezvigadzirwa zvezvimedu uye mbatya dzakasiyana-siyana, dzekugadzira mbatya." Menyu yekutenda inosanganisira turkey dinner nezvose zvigadzirwa kana iwe unokwanisa kuronga mapaiti e soup, salads, steak, pork chops, salmon, kana pasta.
Scott ari paRwizi
Kunyange zvazvo Scott aine hove yekutengeswa kwegungwa, ivo vari kupa chinokanganisa kudya kwekutenda kwemahombekombe nehovhoni yakakangwa "Diestel Ranch" turkey dinner nearlic mbatata yakashambadza uye girafu, kuisa, mbatata yakagadzirwa, cranberry sauce, bhinzi bhinzi marinecake, uye pikisi cheesecake . Mimwe yekutenda menyu zvinhu pane iri resitorendi iri kumagumo eS Sacramento River Parkway Trail, zvinosanganisira kuzadza zvizere zvezviputi, soups, salads, pamwe chete nehove uye nyama yemombe, pasta, uye vana vekutengesa kudya.
Ten22 imwe yeChrist Sacramento eatery umo unogona kudya pamabiko ewa soro uye saridhi sarudzo dzakadai se-butternut squash bisque yakagadzirwa nekasiki yakakangwa yakagadzirwa nemunyika yakasanganiswa kana kuti aple-romaine saladi yakashandiswa ne candied walnuts uye Point Reyes bhuru chese. Iwe unogona kusarudza kubva yakakangwa neBerkshire yenguruve yepafudzi, gumbo regwayana rakagadzirwa neChirungu mint, pasina-range turkey bhiza neTurkey yakasvibiswa apricot uye brandy-almond stuffing, kana kuwa kwechikafu squash risotto. Zvekudyiwa, unogona kusarudza chikafu chepukatsi chinenge chakatsvakwa kamu cream kana kuti chiitanidze muClassic Dutch apple pie nesinamoni crumble topping.
Munharaunda yeElk Grove, makiromita gumi nemashanu kumaodzanyemba kweSadramento, unogona kunakidzwa nemhepo yakasununguka paSilva's Sheldon Inn, iyo inozivikanwa nokuda kwemazuva ayo emwaka inoshandisa zviyo zvinokohwa.
Iwe unogona kuraira tsika yemagariro turkey kudya, nhokwe huru, kana hafu duckling, kungotumidza mazita mashomanana pamutambo wavo wekutenda, pamwe chete nesobho uye saladi. Mukuwedzera, iyo yokuraira inopa mhuka yevana.
Prom Dresses mu Sacramento
Zuva raBaba mu Sacramento
California State Fair: Inside Scoop
Kuitika Zviitiko paAllow Hill Farms
Mafashamo Kunwisa muPoenix, Arizona Inotsanangurwa
Zvinofanira Kuona uye Kuzviita muNew Orleans Pamusi weSvondo Wokuonga
Gay Best Best Bars in Oslo
Pamusoro peKorin City Restaurants
Washington DC 4th of July Parade Rwendo Map
Washington DC Drive-In Movies pa Union Market
Kurumbidzwa Kunowanikwa muAsia
Pamusoro peNew Brunswick Attractions
Zvinhu Zvokuita mu Triangle, North Carolina
National Park yeAmerican Samoa - An Overview
Zuva raamai kuMa Washington DC: Zvinhu Zvokuita
The 15 Most Mostmable Attractions in Chicago